HESHIISKA QABASHADA QARANKA SHAQSIYADA
Markaad gujiso badhannada, waxaad noo soo dirtaa xogtaada shakhsi ahaaneed, taas oo markaa kuu xaqiijinaysa oggolaanshahaaga ku saabsan hawshooda.
Iyadoo la raacayo qodobbada ku xusan sharciga federaalka ee tirsigiisu yahay 152-ФЗ taariikhduna tahay 27.06.2006/XNUMX/XNUMX "Xogta Shakhsiyeed", hawl wadeenku wuxuu ku qasban yahay inuu qaado dhammaan tallaabooyinka urur iyo farsamo ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo ka ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed ee macluumaadka shakhsiga ficillada ama helitaanka shilka iyaga, iyo sidoo kale falalka keenaya burburka, wax ka beddelka, xannibaadda, koobiyeynta, qeybinta macluumaadka shakhsiga ah. Tallaabooyinka kale waxay u qalmaan inay yihiin sharci-darro.
Kheyraadka internetka (goobta) waa kakooban sharraxaadda qoraalka, qaybaha garaafka, qaybaha naqshadeynta, sawirrada, koodhadhka barnaamijka, sawirrada iyo fiidiyowyada, iyo sidoo kale cunsurro kale oo lagama maarmaan u ah shaqadooda faa'iidada leh. Cinwaankeenna: cgreality.ru
Oo ku hoos yaal Maamulka Goobta waxaa loola jeedaa dadka ka shaqeeya AAAA ADVISER LLC oo xaq u leh inay maamusho.
User - booqde degel oo soo galay Bogga, oo aqbalay xaaladda oggolaanshaha ee su'aasha, iyadoon loo eegin inuu gudbay diiwaangelinta, nidaamka oggolaanshaha iyo haddii kale.
Under Ilaalinta xogta shakhsiga macnaheedu waa nidaam hawleed u oggolaanaya u hoggaansamida shuruudaha xeerarka sharci dejinta ee Xiriirka Ruushka marka la eego keydinta, ka shaqeynta, keydinta iyo wareejinta xogta shakhsiga ah ee martida.
Waa maxay xogta soo booqdayaasha ka shaqeeya marka la booqanayo goobta:
Xogta baasaboorka booqdaha (magac buuxa);
Emailka booqdaha ama cinwaanka IP;
Tel. Maya. soo booqde
Adoo aqbalaya shuruudaha Heshiiska faallooyinka ah, Booqdaha wuxuu xaqiijinayaa ogolaanshihiisa inuu qaado talaabooyin la xiriira ka shaqeynta xogtiisa.
Ka shaqeynta xogta su'aasha laga qabo waxay muujineysaa ficilada soo socda:
caddeyn (cusbooneysiin, isbeddello)
gudbinta (qeybinta, helitaanka marinka)
hirgelinta qof iska dhigid
burburka xogta shakhsiga ah.
Si loo fuliyo waajibaadka ay bixiyeen Sharciga Federaalka ee kor ku xusan iyo ficilada sharciyeed ee ku habboon, maamulka goobta ayaa qaadaysa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Intaas waxaa sii dheer, maamulka goobta, iyadoo la raacayo sharciga federaalka ee kor ku xusan, wuxuu xaq u leeyahay inuu si madax-bannaan u go'aamiyo isku-darka iyo liiska tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah kuna filan si loo hubiyo gudashada waajibaadka ku habboon.
Oggolaanshahan ayaa ansax ah illaa isticmaalaha barta uu ka noqdo. Kala noqoshada waxaa lagu fuliyaa iyadoo loo dirayo arjiga qoraalka ah ee u dhigma boostada diiwaangashan ama u geynta wakiilka sharciga ee shirkadda iyadoo rasiid ah.
Kadib helitaanka codsi qoraal ah oo looga noqonayo ogolaanshahan ka shaqeynta xogta shakhsiga ah, Maamulka goobta cgreality.ru waxaa waajib ku ah inay joojiso ka shaqeysiintooda ayna ka reebto xogta shakhsiga ah keydka.